ऋण तिर्न नसक्दा ४ जनाकाे परिवारले त्रिशूलीमा हा’म फाले ! – Khabarhouse
ऋण तिर्न नसक्दा ४ जनाकाे परिवारले त्रिशूलीमा हा’म फाले !
Khabar house | ४ माघ २०७६, शनिबार ०६:१० | Comments
धादिङ । ऋणले अत्तालिए पछि काठमाडौं थानकोटका विनय लामिछानेको चारजनाको परिवार बिहीबार साँझ त्रिशूली नदीमा हेलिएको छ। सामूहिक आत्म ह’त्या गर्न लामिछाने दम्पती दुई छोरा सहित धादिङ बेनिघाटबाट त्रिशूली नदीमा हेलि एका थिए। नदीमा हा’म फालेका विनयको स्थानीयले उद्धार गरेका छन् भने उनकी पत्नी २७ वर्षीय जमुना रेग्मी लामिछानेको मृ’त्यु भएको छ।
दुई वर्ष र ६ महिनाका दुई छोरा बे’पत्ता छन्। काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–४, थानकोटस्थित विनयको घरबाट प्रहरीले ‘सु’साड नोट’ फेला पारेको छ। ऋणका कारण परिवार सहित आत्म ह’त्या गर्ने निर्णय गरेको सुसाइड नोटमा लेखिएको प्रहरीले जना एको छ। मिटरब्याजमा लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि दुई छोरास हित पति–पत्नी त्रिशूलीमा हे’लिएको प्रहरीको भनाइ छ।
मकवानपुरको चित्लाङमा जन्मेका विनय थानकोटमा बस्दै आएका थिए । लामिछानेले ऋण लिएर काठमाडौं तीनकुने स्थित कमोडिटी अनलाइन व्यापारमा सेयर लगानी गरेको खुल्न आएको छ । सेयर लगानी गर्न विभिन्न व्यक्तिबाट मिटर ब्याजमा करिब दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको सु’साइड नोटबाट पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बिहीबार सु’साइड नोटमा ऋण दिने व्यक्तिहरूको नाम र तिर्नुपर्ने रकम उल्लेख छ।
सु’साइड नोट घरमा छाडेर लामिछाने दम्पती छोराहरू लिएर धादिङ आएका थिए। आफन्तका अनुसार सानो छोराको शुक्रबार भात खुवाइ (पास्नी) थियो। घरमा सुत्केरो परेकाले जमुनाको माइतीमा पास्नी गर्ने योजना अनुरुप उनीहरु बिहीबारनै धादिङतर्फ हिँडेका थिए। आदमघाट बजारस्थित माइती घर नझरीकन उनीहरु बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–४, बाँदरेमोड भन्ने ठाउँमा ओर्लिएका थिए।
खोला किनारमा प्रहरीले भेटेको झोलामा पास्नीका लागि ल्याइएका कपडा र हातमा लगाउने वाला छन् । विनयकी श्रीमती जमुनाले फेसबुक स्टाटसमा मिटर ब्याजमा रकम लिएको र सोको ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्न रकम धनीले द’बाव दिएको लेखेकी छिन् । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।